Fanariana fampiasam-bola sy fanamboarana mekanika -Retool
Sombiny vy vy
Fitaovana fitsaboana ambonin'ny tany
Retool orinasa manana traikefa efa ho 26 taona amin'ny casting marina, hitondra anao safidy, mora, ary vidin'ny fifaninanana.
Ny orinasan'ny Retool dia manizingizina ny fivoarana siantifika ho toy ny famporisihana, kalitao ary hatsaram-panahy ho loharanom-pahalalana. Izahay dia nitady fijoroana trosa faran'izay tsara, kalitao manerantany ary serivisy premium. Maniry mafy izahay hiara-hiasa amin'ireo namana vahiny sy eto an-toerana ary hamorona ho avy mahafinaritra.
Afaka mandefa sy milina karazana vokatra isan-karazany isika araka ny sary na ny santionany atolotry ny mpanjifa. Avo lenta ny fametrahana mazava tsara, ary azo antoka ny kalitao.
Retool Company dia mpiara-miasa matoky amin'ny indostrian'ny casting. Mampihatra izany fahatokisana izany izahay ary mampiasa ny fahalalanay hifanaraka amin'ny fepetra takianay. Ny injenieranay dia miaina amin'ny sehatra rehetra amin'ny indostrian'ny fanariana. Izahay dia manome ny laharam-pahamehana voalohany indrindra hatrany amin'ny kalitao ary mifehy tsara ny fomba famokarana rehetra araka ny ISO9001.
Screw ho an'ny milina mpitrandraka hena
Ireo mpiorina mpamokatra herinaratra
Shijiazhuang Retool Stainless Steel Products Co., Ltd. natsangana tamin'ny 1994.Retool dia misy ao amin'ny faritra Indostrialy Xinzhaidian, tanàna Shijiazhuang, miaraka amin'ny fitaterana mety sy toerana ambony. Ny orinasa Retool dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana karazana valva rehetra ary ny famokarana ny ampahany fampiasam-bola sy ny faritra misy ny milina.
No.3 Mingzhu Road, faritra indostrialy Xinzhaidian, Zhaoxian, Shijiazhuang, Sina